कति छ एप्पलमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब ? « Today Khabar
कति छ एप्पलमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब ?
प्रकाशित २२ कार्तिक २०७४, बुधबार १०:१३
पहिलो पटक भारतमा विश्व चर्चित कम्पनी एप्पलले रोजगारी दिने भएको छ। यसका लागि एप्पलले ‘प्लेसमेन्ट’ कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत भारतमा रहेका प्रतिभाशाली इन्जिनियरलाई एप्पलमा काम गर्ने मौका खुल्ने छ।
२०१६ को रिपोर्टअनुसार एप्पलको १७ देशमा ४७५ स्टोर्स छ। नयाँ दिल्ली (एजेन्सी)